DEG-DEG: Manchester United Oo Shaacisay Lambarka Uu Xidhan Doono Edinson Cavani - Gool24.Net
DEG-DEG: Manchester United Oo Shaacisay Lambarka Uu Xidhan Doono Edinson Cavani
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday lamabarrada ay xidhan doonaan saxeexyadii cusbaa ee ay samaysay maalintii ugu dambaysay suuqa iibka ciyaartoyda oo ku beegnayd saqdii dhexe ee xalay.
Red Devils ayaa dhamaystirtay saddex saxeex oo kala ahaa Edinson Cavani oo afka hore ee weerarka ah, Alex Telles oo difaaca bidix ka ciyaara iyo Amado Diallo oo garabka weerarka ah laakiin bisha January iman doona Old Trafford maadaama ay bilo koobani ka hadhsan yihiin waqtigii uu sharcigu u ogolaanayay inuu u safri karo waddan shisheeye oo uu Talyaaniga dibedda uga bixi karayo.
Saxeexa ugu hadal haynta badan ee Manchester United samaysay ayaa noqday Edinson Cavani oo ay da’diisu tahay 33 jir, isla markaana si xor ah ku yimid Old Trafford kaddib markii uu dhamaaday qandaraaskii uu kula jiray PSG oo uu toddobadii sannadood ee ugu dambeeyey u ciyaarayay, laakiin uu bishii June iskaga tegay.
Edinson Cavani ayay Manchester United hadda ku dhawaaqday lambarka uu u xidhan doono, waxaanay u garteen inuu ku biiro liiska halyeeyada oo uu dhabarka ku qaato lambarka caanka ah ee No.7 oo ay hore usoo xidheen ciyaartoydii ugu waaweynaa kooxda.
No.7 ayaa waxa hore usoo xidhay halyeeyo ay ka mid ahaayeen George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham iyo Cristiano Ronaldo, laakiin sannadihii ugu dambeeyey ay dhamaan ciyaaryahannadii xidhay noqdeen kuwo fashilmay oo ilaalin kari waayey sharafkii uu lambarkani lahaa.
Weeraryahanka reer Uruguay oo inta badan waayihiisa ciyaareed soo xidhnaa No.9 oo xataa PSG uu u xidhnaa, ayaa waxa uu No.7 soo gashaday xilliyadii uu joogay Palermo iyo Napoli.
Cavani ayaa noqon doona ciyaartoygii sagaalaad ee Manchester United u xidha No.7 laga soo bilaabo xili ciyaareedkii 1993/94 oo laga joogo muddo 27 sannadood ah.